Namoaka ny famolavolana ny medaly olaimpika 2022 any Beijing i Shina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Namoaka ny famolavolana ny medaly olaimpika 2022 any Beijing i Shina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Namoaka ny famolavolana ny medaly olaimpika 2022 any Beijing i Shina.
Nantsoina hoe “Tongxin”, midika hoe “Miaraka ho iray”, ireo medaly ireo dia ahitana peratra dimy mivondrona mandrafitra ny filozofia nentim-paharazana Shinoa momba ny firindrana eo amin'ny lanitra, ny tany ary ny olombelona.
Nanamarika ny fanisana 100 andro niaingana ny lalao ny fanokafana ny medaly.
Rehefa nampiantrano soa aman-tsara ny Lalao Olaimpika fahavaratra 2008 i Beijing dia ho lasa tanàn-dehibe voalohany nanao andiany tamin'ny fahavaratra sy ny ririnina tamin'ny fampisehoana ara-panatanjahantena manerantany.
Ny mpikarakara ny Beijing 2022 dia nanasongadina ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpandray anjara ho laharam-pahamehana.
Herinandro latsaka taorian'ny nahatongavan'ny lelafo olaimpika tao Shina taorian'ny nandrehitra azy tany Olympia fahiny, Gresy, Beijing 2022 Naseho androany ny famolavolana medaly olympika.
ShinaNy renivohitra dia nankalaza ny fanisana 100 andro ho an'ny Lalao Olympika Olympika 2022 ny talata niaraka tamin'ny dingana iray hafa ho fanomanana ny Beijing 2022 mandroso amin'ny dingana farany.
Nantsoina hoe “Tongxin”, midika hoe “Miaraka ho iray”, ireo medaly ireo dia ahitana peratra dimy mivondrona mandrafitra ny filozofia nentim-paharazana Shinoa momba ny firindrana eo amin'ny lanitra, ny tany ary ny olombelona. Ny peratra koa dia maneho ny peratra olaimpika, voasokitra ao anaty faribolana anatiny, ary ny fanahy olaimpika mampiray an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanatanjahantena.
Ny famolavolana medaly dia aingam-panahy avy amin'ny jadeware sinoa antsoina hoe "Bi", kapila jade roa misy lavaka boribory eo afovoany. Tahaka ny fiheverana ny jade ho haingo tsara sy sarobidy amin'ny kolontsaina Shinoa nentim-paharazana, ny medaly dia fijoroana ho vavolombelona momba ny voninahitra sy ny ezaka tsy an-kijanona ataon'ireo atleta.
Miaraka amin'ny areti-mifindra COVID-19 mbola mirongatra any amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao, Beijing 2022 Notsindrian’ny mpikarakara ho laharam-pahamehana ny fahasalamana sy fiarovana ny mpandray anjara.
Navoaka tamin'ny alatsinainy ny andiany voalohany amin'ny kilalao kilalao Beijing 2022, manome torolàlana ho an'ny atleta sy ny tompon'andraikitra mba hahazoana antoka fa azo aterina soa aman-tsara mandritra ny valan'aretina ny Lalao Olaimpika sy Paralympika amin'ny ririnina amin'ny taona ho avy.
Ireo boky filalaovana roa, ny iray ho an'ny atleta sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny ekipa, ary ny iray ho an'ny mpandray anjara hafa rehetra, dia miresaka momba ny fanoherana COVID-19 lehibe, ao anatin'izany ny fitantanana mihidy, ny vaksiny ary ny fitsapana.
Araka ny efa nambara teo aloha dia tsy mila confinement mandritra ny 19 andro ireo rehetra efa vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-21 rehefa tonga any. Shina ary afaka miditra amin'ny "rafitra fitantanana mihidy" kosa. Ireo ao anatin'ny rafitra fitantanana mihidy dia hotsapaina isan'andro ho an'ny COVID-19.
Ny andiany faharoa amin'ny Playbooks dia natao havoaka amin'ny volana Desambra.
Nanomboka tamin'ny 5 Oktobra, nisy andiana fifaninanana iraisam-pirenena natao tao amin'ny National Speed ​​Skating Oval sy ny Capital Gymnasium ao afovoan-tanànan'i Beijing, ary ny National Sliding Center ao Yanqing mba hizaha toetra ny asa toy ny fanaovana ranomandry, ny fotoana sy ny naoty, ny COVID-19. , fiarovana sy fitaterana.
Ny hetsika amin'ny volana Novambra dia hahita fiadiana ny amboara eran-tany luge arahin'ny hetsika fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny snowboarding sy freeski cross, miaraka amin'ny hetsika Continental Cup ho an'ny ski jumping sy Nordic natambatra tamin'ny volana Desambra.
Tombanana fa eo amin'ny 2,000 eo ho eo ny atleta any ivelany sy ny mpiasan'ny fanohanana no mandray anjara amin'ny hetsika fitsapana, mamela ny mpikarakara hanao tobim-panadinana sy fandidiana alohan'ny Beijing 2022.